एमाले, अब के गर्ने ?
Sunday, 11 Dec, 2016 1:57 PM
प्रशान्त ओझा / टिप्पणी​
सरकारले सीमाकंन परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सदन र सडकमा आन्दोलनरत छ । एकहिसावले एमालेका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध आफ्नो अस्तित्व जोगाउने लडाईजस्तै बन्न पुगेको छ । एमालेले जसरी आफूमात्रै राष्ट्रवादी शक्ति भएको घोषणा गरेको छ, उसलाई त्यो भन्दा ठूलौ चुनौती आफ्नै उक्त घोषणा जोगाउनमा देखिन्छ । किनकी अबको राजनीतिक घटनाक्रमहरु एमालेको प्रतिकुल जाने संभावना बलियो बन्दै छ ।
एमालेले विरोधकै लागि गरेको विरोध धेरै दिन टिक्ने अवस्था अब छैन । किनकी एमालेले गरिरहेको ‘आन्दोलन’को पनि विरोध सुरु भइसकेको छ । एमालेले सडक विरोधका लागि केन्द्र बनाएको प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लामा बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालिसकेका छन् । एमाले नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी भइसकेको अब यो पाराको बिरोध टिक्न सक्दैन । अध्यक्ष केपी ओलीका टुक्कालाई महावाणी मानेर भजन गर्नेहरुबाहेक अन्य एमाले नेताहरुले सोच्ने बेला आइसकेको छ, ‘अब के गर्ने ?’
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय पछि एमालेको एउटा नारा घटिसकेको छ । ‘मधेसवादी दलले नै विरोध गरेको संशोधन पस्ताव कसका लागि ?’ भन्ने एमालेले संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्न अरु शब्द खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । उसले भनेको राष्ट्रवालाई परिभाषित गर्न पनि शब्दहरु सीमित बन्दै गइरहेका छन् । उहिल्यै महाकालीमा बिकिसकेको एमालेको राष्ट्रवाद फेरि पनि भारतको कुनै अर्को प्रस्तावमा नबिक्ला भन्ने ग्यारेन्टी के ? नेपालीले भुलेका छैनन्, पशुपतिबाट भारतीय पूजारी हटाइएपछि तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश शुदलाई अतिथि बनाएर सरकारको विरोध गर्ने यीनै केपी ओली नै हुन् ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशको सीमाकंन परिमार्जन गरिनुलाई एमालेले विरोध गर्ने मुख्य विषय बनाएको छ । तर, उसले नै गरेको प्रस्तावअनुसार अहिले उक्त विषय अघि सारिएको हो भन्ने कुरा प्रदेश नम्बर ५ का बासिन्दाले बुझ्न थालिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ७ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावअनुसार नै अहिले सीमाकंन परिमाजर्न गर्ने विषय सरकारले अगाडि सारेको हो भन्ने विषय एमालेकै विरोधका कारण झन बढी प्रचार भइरहेको छ । आन्दोलनमा सहभागी जनताले नै एमालेलाई नैतिकता सिकाउन थालेका छन् । तर, एमाले अझै पनि आत्मरतिमै रमाइरहेको छ ।
आन्दोलनमा मधेसीको सहादतलाई ‘रुखबाट दुईचार दाना आँप खसेको’ संज्ञा दिने एमाले अध्यक्ष ओलीले बुझ्न आवश्यक भइसक्यो एमालेको आन्दोलनलाई भन्दा सरकारले अघि बढाएको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्नेको जनताको संख्या बढी भइसक्यो । किनकी संविधान संशोधनको विरुद्ध एमाले अहिलेसम्म गरेको आन्दोलनको कुनै तुक छैन । ‘राष्ट्रवाद’को सेन्टिमेन्टले जति छिट्टै जनता जुरुक्क हुन्छन्, अस्लियत थाहा पाएपछि त्यति नै उग्र पनि हुन्छन् । एमालेले आन्दोलनको यो बाटो नछाडे राष्ट्रवादका पक्षमा उभिएकाहरु पनि एमालेको विरुद्ध नारा लाउन बाध्य छन् । किनकी एमालेको राष्ट्रवाद जुनसुकै बेला बिक्न सक्छ ।
‘राष्ट्रवादी’ मुखुण्डो उत्रिनु अगाडि नै एमालेले आफ्नै लागि भए पनि आन्दोलनको विकल्प सोच्न जरुरी छ । किनकी परिस्थितिलाई सधैं आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिदैन । भोली सदन र सडकमा एमालेले जिल्ल पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । एमालेको असली राष्ट्रवादको मुखुण्डो उत्रियो भने उसले पुनः ५६ साल बेहोर्नु पर्ने छ । केपी ओलीहरु महाकाली प्रक्रणमा परिचित अनुहार हुन् । माधव नेपालहरु आन्तरिक दमनको सिकार कहिलेसम्म भइरहने ? योगेश भट्टराईहरुलाई यो विषय थाहा भइसकेको विषय हो ।
अरुलाई मजाक बनाएर उडाउनेहरु अक्सर आफैं मजाक बन्ने गरेका उदाहरणहरु दुनियामा धेरै छन् । त्यो विषय त शेरबहादुर देउवा र पहिलो संविधानसभाका बेला मोटाएर अहिले सुकेनास लागेको माओवादीबाट पनि सिक्न सकिन्छ । पहिलो गणताक्त्रिक सरकारबाट बाहिरिए पछि माओवादीले पनि नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाभिमानकै नारा लगाएको थियो । तर, उसले अनुमान पनि गर्न सकेन राजधानी कब्जा गर्न भनेर ल्याइएकाहरु गल्लीमा भात खोज्दै भौतारिनु पर्ने अवस्था पनि आउनेछ भनेर । एमालेको हालत अहिले पहिलो संविधानसभाताको माओवादीको जस्तै छ । ओलीले आफ्नो ‘घमण्ड’ तोडेनन् भने चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मर्ने निश्चित छ ।
अझै पनि परिस्थितिले एमालेलाई सोच्ने समय दिएको छ । हिउँदे तापक्रमको फाइदा उठाएर एमालेका नेताले सोचुन् अब गर्ने के ? ओलीकै भाषामा भन्नु पर्दा ‘मंसिरमा जन्ति आउननेहरु मलामीमा पनि आउनेछन्’ भन्न सकिदैन ।